Sida looga saaro bogagga PDF qalabkan bilaashka ah | Abuurista khadka tooska ah
Qiyaas inaad u sameysay pdf macmiil miisaaniyad leh, mashruuc ... Isla markaana si lama filaan ah wuu kuu soo wacayaa kahor inta uusan u dirin wuxuuna kuu sheegayaa inuu jiro isbedel Taasi waxay tusineysaa in hal ama laba xaashi oo ah PDF-gaaga la tirtiro. Laakiin, Sidee looga saaraa bogagga PDF haddii aadan haysan dukumintiga asalka ah?
Tani way dhici kartaa, waxaadna wajihi doontaa laba ikhtiyaar: ama inaad ku celiso dukumintiga, lumiso saacado iyo saacado aad markale sameyso; ama isticmaal boggag ama barnaamijyo kaa caawinaya inaad ka tirtirto bog ka mid ah PDF-ga adigoon wax kale samayn iyo daqiiqado gudahood. Fikradani ma adiga ayaa kaa soo jiidasho badan? Hagaag, fiiro gaar ah maxaa yeelay waxaan ku baran doonaa sida looga saaro bogagga si fudud PDF.
1 Maxaad uga saareysaa bogagga PDF?
2 Sida looga saaro bogagga PDF
2.3 Tirtir Bogga PDF
2.4 Qalabka PDFill
Maxaad uga saareysaa bogagga PDF?
Caadi ahaan, markii aad sameysid PDF toos uma dhisaysid qaabkan laakiin waxaad adeegsaneysaa tifaftire qoraal ah si aad u sameysato dukumiintiga oo markii la sameeyo, halkii aad ku keydin laheyd doc ama wax la mid ah, waxaad ku sameyn doontaa PDF.
El Dhibaatada haysata PDF-yada ayaa ah in kumbuyuutarro badan barnaamijyada la heli karo ay yihiin oo keliya in la arko dukumintiga, laakiin ma aad tafatiri kartid, tirtiri kartid qaybo, geli kartid sawirro ama, sida kiiskan ah, ka saar bogagga PDF. Taasina waa dhibaato.
Marka ay tahay inaad dib u sameyso dukumiintigaas, ama marka aad wax ka beddeleyso, waxaad u baahan tahay xakameyn buuxda oo ku saabsan wax kasta oo ka mid ah, maxaa yeelay waxay noqon kartaa kiiska inaad ka saarto bogagga aan sii shaqeynaynin, ama hadda duugoobay .
Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in la yeesho barnaamijyo ama qalab maadaama, haddii kale, oo haddii aadan firfircooneyn oo aadan nuqul ku keydin dokumenti ama wixii la mid ah dukumintigaas, waa inaad mar labaad ka sameysaa xoqidda (ama isticmaal PDF si aad u beddesho doc , xitaa haddii ay jabiyaan dukumintiga).
Sida looga saaro bogagga PDF
Hadda oo aad fahantay sababaha ay tahay inaad u ogaato aaladda aad bogagga uga saareyso PDF, waxaa la joogaa waqtigii aan ka hadli lahayn dhowr ikhtiyaar oo aad tixgelin karto. Waxa ugu fiican waa taas isku day xalalka qaarkood Taas oo aan ka hadlayno tan iyo sidaan waxaad ka heli kartaa midka ku habboon dhadhankaaga ama midka ku siinaya natiijooyinka ugu fiican.
Xulashada ugu horeysa ee aan ku siineyno waa Adobe Acrobat. Haa, maahan bilaash laakiin waxaan dooneynay inaan dhigno maxaa yeelay waxay leedahay mudo tijaabo ah oo bilaash ah, waxaana laga yaabaa inay tahay waqtiga ugu haboon ee lagu isticmaali karo markii aad ku fashilantay fashilka oo aadan haysan asalka. Intaa waxaa dheer, waa aaladda ugu fiican ee lagula shaqeeyo PDF iyo haddii waad u isticmaali kartaa si aad uga saarto bogagga PDF si fudud adigoon taabanin dukumiintiga intiisa kale, aad ugafiican.
Si tan loo sameeyo, soo dejiso barnaamijka oo dhaqaajiso tijaabada bilaashka ah. Marka xigta, fur barnaamijka oo ka fur faylka PDF meesha aad ku hayso.
Taabo bogga thumbnail. Waxay ku jiri doontaa safka bidix laakiin, haddii uusan soo bixin, dhagsii Guddiyada Muuqaalka-Muuqaalka / Qari-Navigation-Sawirrada Bogga.
Riix furaha Ctrl. Hadda, jiirka, dooro bogagga aad rabto inaad ka saarto. Ugu dambeyntiina, xagga sare ee guddi-yar-yar ee thumbnail, guji Delete.
Wax walbana waa la qaban doonaa. Kaliya waa inaad keydisaa dukumiintiga waxaadna heli doontaa natiijada adoo ka saaraya bogaggaas.
Waa kuwan barnaamij kale oo aad u adeegsan karto inaad si fudud uga saarto bogagga PDF. Dhab ahaan, Kaliya maahan inay tirtiri karto bogagga, laakiin sidoo kale waad tafatiri kartaa qoraalka, u beddeli kartaa, isku dari kartaa, kala qaybsan kartaa PDF ... Sidaa darteed, waa mid ka mid ah qalabka ugu dhammaystiran ee jira.
Hadda, maskaxda ku hay inaad u isticmaali karto oo keliya Windows-ka. Looma heli karo nidaamyada kale ee ka shaqeeya.
Tirtir Bogga PDF
Qalab si sax ah ugu socda dhibaatada aan la macaamilayno, oo bogagga ka saareysa PDF, waa tan. Ka tirtir bogagga aan loo baahnayn si fudud maaddaama ay ku tusayso bogagga oo kaliya waa inaad doorataa kuwa aad rabto inaad ka noqoto si aad uga saarto dukumintiga.
Kani wuxuu noqon karaa mid ka mid ah barnaamijyada ugu wax ku oolka badan, gaar ahaan haddii ay tahay inaad tirtirto bogag badan oo aad u baahan tahay inaad horay u daawato si aan qalad u dhicin oo aad u tirtirto wax ay tahay inaadan saarin.
Qalab kale oo bogagga looga saaro PDF waa kan, kaas oo kaliya u adeegin in la tirtiro bogagga laakiin sidoo kale dib u habayn ku sameeya bogagga isla markaana kala jajabiya PDF-ga. Xitaa way kuu ogolaaneysaa Abuur calaamado iyo soo saar bogag faylal gooni ah (haddii ay dhacdo inaadan rabin inaad lumiso bogaggaas aad tirtiri doonto).
Xaaladdan oo kale, runti maahan barnaamij aan ka hadlayno, laakiin degel kaa caawin doona inaad bogagga si fudud uga saarto PDF. Si tan loo sameeyo, waa inaad aadaa websaydhka oo aad gujisaa qaybta 'Split PDF', taas oo ah in la jaro pdf.
Waad ubaahantahay ku qor dukumintigaaga barnaamijkooda (Hadday aad muhiim u tahay oo ay ku jirto xog gaar ah, waa inaad adeegsataa habab kale maadaama halkan aad lumisay kontoroolka dukumiintiga oo aadan garanayn waxa dhici kara). Markaad haysato, shabakadu waxay ku siin doontaa muuqaal dhammaan bogagga dukumiintiga. Hadda, waa inaad doorataa bogagga aad rabto inaad keydiso oo aad uga tagto kuwa aad tirtiri doonto calaamadeynta. Markaad dhamayso, waa inaad gujisaa Split PDF! isla markaana ilbiriqsiyo gudahood waxaa soo muuqan doona PDF cusub oo soo dejinaya oo hubinaya inaad si sax ah u sameysay.
Adiga oo aadan taabanin PDF-ka, natiijada aad soo dejiso waa inay la mid noqotaa ta asalka ah marka laga reebo jiritaan la'aanta bogaggaas aad tirtirtay. Laakiin wax kasta oo kale waa inay isku meel ku ekaadaan.
Sidaad arki karto, waxaa jira qalab badan oo aad isticmaali karto si aad uga saarto bogagga PDF. Laakiin waxa ugu fiican, gaar ahaan haddii ay kugu dhacdo adiga marar badan, ayaa ah in, markii aad dukumintiga kaydinayso, aad u sameyso labadaba qaab dukumiinti iyo PDF. Sidan ayaad awoodi doontaa inaad xalliso dhibaatada si dhakhso leh xitaa waxaadna yeelan doontaa "ilaalin" waxa ku dhici kara PDF-ga, ama haddii aad u baahan tahay inaad isbeddel ku sameyso mustaqbalka (muddo gaaban ama waqti dheer).
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tricks » Sida looga saaro bogagga PDF qalabkan bilaashka ah